Listhaug oo ku Howlan inay Qaxootiga ka Joojiso Imaanshaha Norway | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Listhaug oo ku Howlan inay Qaxootiga ka Joojiso Imaanshaha Norway
Wasiirka cadaaladda Sylvi Listhaug (Frp) oo soo dhawaysay qorshe ay soo jeedisay Danmark. AP oo ay ka rajaynayso inuu wax ka baran doono xisbiga ay isku siyaasadda yihiin ee Denmark.
Xisbiga reer Denmarka sosial demoqraadiga guddoomiyihiisa Mette Fredriksen ayaa isniintii sheegtay in Danmark ay kaamamka qaxootiga lagu qaabilo ee dalkeeda ka howlgelin doonto dalal kale, isla markaana ay irdaha iskugu dhufan doonaan kaamamka hadda furan kana horjoogsan doonaan dadka qaxootiga ah inay lugta soo dhigaan ciidda Danmark.
Xilli ay gabadha arrimaha qaxootiga u qaabilsan xisbiga Høyre Kristin Ørmen Johnsen sheegtay inay ka soo horjeedo qorshaha denmark ayey Listhaug wasiirka cadaaladu muujisay sida ay ugu riyaaqsan tahay soo jeedinta Daanishka.
Sida horeyba looga hadlay saaxadaha xukuumadda, fursaadaha jira waxaa ka mid ah oo aan rabno inaan egno, inagoo kaashanayna midowga Yurub – in kaamam laga sameeyo meelo bannaanka ka ah Yurub ayey tiri Listhaug.
Waxay dhanka kale rajo ka muujisay in xisbiga shaqaaluhu uu wax ka baran doono dhawaqa ka soo jeeray xisbiga ay siyaasad wadaagga yihiin ee Danmark, taasoo suurto gellin karta in uu taageero u helo Frp siyaasadiisa ku wajahan soo galootiga.
Waxaan rajaynayaa in ay hadda hurdada ka toosaan, dhagaystaana xisbiga la walaalka ah, nagula soo biiraan adkaynta isku keenidda qoysaska iyo shuruudo adag ku xirista qaadashada dhalashada Norway ayey tiri wasiirka cadaaladu.
Guddoomiyaha xisbiga Ap Jonas Gahr Støre ayaa sheegay dhankiisa inuu la dhacsan yahay qorshaha xisbiga Danmark marka loo eego hiigsiga mustaqbalka Norway kuna wajahan qaxootiga oo xooggiisa noqon doona kootada qaramada midoobay u soo gudbiso dalalka.